Armenia: Straight mankany an-tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2018 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Italiano, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, Aymara, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2012)
Miaraka amin'ny tahan'ny Harinkarena faobe isan-taona izay tombanana ho $5,400 eo fotsiny tamin'ny 2011, iray amin'ireo firenena mahantra indrindra tao amin'ny Firaisana Sovietika taloha i Armenia. Fa na dia mety hanome endrika hafa ho an'ny mpizahatany hafa aza ny fandrosoana ao Yerevan, renivohitry ny firenena, indrindra avy amin'ny Zanaka ampielezany midadasika be, mazava foana ny toedraharaha ara-toekarena any amin'ireo faritra lavitra andriana ao anatin'ny firenena Kaokazy Atsimo.
Ny fampandrosoana faritra izay miha laharampahamehana hatrany hatrany ao Armenia, niara-niasa tamin'i Timothy Straight, iray amin'ireo vahiny tsy Armeniana nipetraka tao amin'ny firenena, ny tranonkala CivilNet. Maniry ny hanova izany rehetra izany ny lehiben'ny Filankevitry ny Mpitsoa-ponenana Norveziana taloha sy ny Kaonsioly Honorarin'i Norvezy sy Finlandy amin'ny fitetezana tanàna hafa isan-kerinandro.
”Ny hanangona vaovao ary ny hanaparitaka izany no nezahanay ho atao, mba hahazoan'ny olona tsara ny fiainana any amin'ny tanàna ao Armenia,” hoy ilay lahatsoratra manaraka ny lahatsary iray fampahafantarana ny Թիմը գնում է գյուղ (Mankany an-tanàna i Tim), fantatra koa amin'ny hoe “Straight mankany an-tanàna“.
Nalefa an-tambajotra tamin'ny 20 Septambra tamin'ny herintaona ny fizarana voalohany ary mijery ny tanàna roa ao amin'ny sisintany iraisana amin'i Tiorkia izay mifototra amin'ny famokarana voankazo ny fidiram-bolany.
Tao amin'ilay fizarana farany nakarina tao amin'ny Youtube tamin'ny 2 Aprily, ary nadika tamin'ny teny Anglisy sy Armeniana, mitsidika ny tanàna mahantra ao Vardenis izay manakaiky ny Farihy Sevan ao Armenia i Straight. Ny hihaona amin'ny Fikambanana Tsy Miankina any an-toerana izay miasa miaraka amin'ireo ankizy sembana no tanjona tamin'ilay fitsidihana.
Tamin'ny 12 Martsa, nankalaza ny fizarana faha-20-ny niaraka tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny Straight ilay fandaharanasa izay ”iresahany mikasika ny sasany amin'ireo hevi-dehibe sy hanazavany ny antony hanaovany ilay fandaharanasa ary ny fiantraika maharitra avy amin'ilay andian-tantara.”
Nambaran'ny Mpanjakan'i Norvezy tamin'ny 2010, tsy mijanona amin'ny tatitra an-dahatsary irery ihany ny asan'i Straight ao amin'ny fampandrosoana ara-paritra ao Armenia. Ny Homeland Handicraftss, ohatra, dia fikambanana mpilatsaka an-tsitrapo natao hananganana fidirambola maharitra ho an'ireo mpanao asa tanana ao Armenia.
Ampiasaina manokana ihany koa ireo fitaovana an-tambajotra, blaogy ary koa pejy Facebook sy Pinterest mba hampiroboroboana ilay hetsika santatra. Afaka arahina ao amin'ny Twitter amin'ny adiresy @timothystraight ihany koa i Timothy Straight.
13 ora izayAzerbaijan